Na-asụ Nova Aliança (New Alliance Community)
NOVA ALIANÇA (CNA) MGBE
1983 (Machị 31): A mụrụ Eduardo Ramos na Governador Valadares, MG, Brazil.
1985 (March 26): Debora Oliveira mụrụ na Brasília, DF, Brazil.
1986 (July 21): Jonathan Bolkenhagen mụrụ na Planalto, RGS, Brazil.
2001: Eduardo Ramos soro ndị mụrụ ya kwaga Australia.
2002: Debora Oliveira kwagara na Australia na ndị mụrụ ya.
2002: Eduardo Ramos na Debora Oliveira zutere n'ụlọ ụka Brazil "Assembleia de Deus na Australia Church" (Mgbakọ nke Chineke na Australia)
2003: Eduardo Ramos na Debora Oliveira hapụrụ “Assembleia de Deus na Australia Church” ma sonye na chọọchị ọzọ dị na Brazil nke a kpọrọ “Assembleia de Deus na Australia Ministério Aguia.” Churchlọ ụka a dị na Brazil dị na Petersham Assemblies of God Church.
2006 (Disemba): Onye ụkọchukwu Brazil nke "Assembleia de Deus na Australia Ministério Aguia" kwagara na Queensland ma hapụ ụka enweghị onye isi.
2007 (Jenụwarị): Pastọ Barry Saar (Onye Isi Ala na Petersham Assemblies of Church Church) kpọrọ Eduardo Ramos ka ọ weghara ụka Brazil.
2007 (February): Eduardo Ramos na Debora Oliveira guzobere CNA. Eduardo ghọrọ pastọ ya.
2007 (February): Eduardo Ramos na Debora Oliveira lụrụ.
2007-2008: Pastọ Barry Saar rụrụ ọrụ dị ka pastọ pastọ nke CNA na onye ndụmọdụ maka Eduardo na Debora ka di na nwunye ahụ gụrụ akwụkwọ na Alphacrucis College (kọleji Ndị Kraịst na kọleji na-ahụ maka ụlọ akwụkwọ kọleji nke Christian Christian Churches, bụbu Mgbakọ nke Chineke na Australia ).
2008: Njem njem ụlọ ụka mbụ mere na Ista.
2009 (Machị): Ọ bụ ndị ụka Kraist nke Australia (ACC) họpụtara Ekọchukwu Eduardo Ramos wee bụrụ onye ụkọchukwu nke ụka CNA.
2007 (October): Nwa akwụkwọ Brazil bụ Jonathan Bolkenhagen bịarutere Australia wee banye na CNA.
2012 (May 22): Jonathan Bolkenhagen gụsịrị akwụkwọ na kọleji Alphacrucis.
2012 (June 21): Pasto Eduardo Ramos bụ onye a họpụtara ịbụ Minista nke ACC.
2012 (November 22-25): E mere ogbako mbụ CNA. Vinkọchukwu Vinicius Zulato nke ụka Lagoinha dị na Brazil bụ ọbịa pụrụ iche.
2012: Mgbe ogbako ahụ gasịrị, pastọ Zulato kụziiri ndị pastọ CNA ihe ọmụmụ dị nta banyere Theology iji wusi ntọala nke nkà mmụta okpukpe ha ike.
2013: Ndị otu ọgbakọ kwagara Adelaide na Canberra ma mepee otu njikọ CNA na obodo ọ bụla.
2016 (August 27): CNA Canberra nwere ọrụ mbụ ya.
2016: E chiri Jonathan Bolkenhagen ka ọ bụrụ ụkọchukwu na CNA.
Eduardo Ramos [Foto dị n'aka nri] bịarutere Australia na 2001, mgbe ọ dị afọ iri na asatọ. Debora Oliveira batara na 2002, mgbe ọ dị afọ 16. Na Brazil ha bụbu ndị ụka ụka Baptist. Mgbe ha rutere na Sydney, ha sonyeere ma hụ ibe ha na naanị ụka dị na Brazil n'oge ahụ: ụka Pentikọstal Assembleia de Deus na Australia Church (Nzukọ nke Chineke na Australia), mechara kpọọ Igreja Avivamento Mundial (Church Revival Church) (Rocha World) 2006). Otú ọ dị, otu afọ mgbe e mesịrị, na 2003, di na nwunye ahụ na mmadụ ole na ole nọ n'ọgbakọ ahụ hapụrụ chọọchị a iji sonye na chọọchị ọhụrụ Brazil nke dị na ogige nke hamlọ Nzukọ Chineke nke Petersham. Ha nọrọ na ụka ọhụrụ a akpọ Assembleia de Deus na Australia Ministério Aguia rue Disemba 2006, mgbe ụkọchukwu Brazil ahụ kwagara Queensland ma hapụ ụka enweghị onye isi.
N'ihi ya, na January nke 2007 Pastọ Barry Saar, Onye Minista Ukwu na Petersham Assembly Assembly nke Chineke, gwara ọgbakọ ka ha họpụta onye a ga-azụzi dịka onye pastọ iji duga chọọchị ahụ. Ọgbakọ ahụ họọrọ Eduardo Ramos ka ọ bụrụ pastọ ha ọhụrụ. Na February nke 2007, Eduardo na Debora lụrụ ma kwadoo CNA. Ha kwetara na Pastọ Saar ga-eduzi ha ka ha na-amụ akwụkwọ na kọleji nke Alphacrucis (ụlọ akwụkwọ ndị Kraịst na mahadum na ọzụzụ ụlọ akwụkwọ nke Australian Christian Churches). Ha dị nnọọ obere mgbe ha malitere chọọchị (ọ bụ afọ iri abụọ na atọ na ọ bụ iri abụọ na otu); ya mere, na afọ mbụ, ha dabeere na pastọ Saar maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile (dịka, ntọala nkà mmụta okpukpe nke CNA na ụkpụrụ iwu, ntụziaka banyere otu esi akwado ndị otu ọgbakọ na otu esi arụ ọrụ dịka ụka).
Eduardo na Debora chere na ụka ha gara aga adịghị echefu. Nke a bụ n'ihi na ọ na-enye ndị ọgbọ ochie nke ndị ọrụ Brazil ndị bịarutere Australia dịka akụkụ nke mbụ njem Brazil (1970s-1990s). Ha choro otu uka ndi na-adighi ala nke ga-achikota njem mbu nke uzo mbu (1990s gara aga). Nke a gụnyere ọnụ ọgụgụ na-eto eto nke ụmụ akwụkwọ na-eto eto na-eto eto na-aga Australia iji nyochaa asụsụ Bekee na mpụga nwere ike ịnweta (Rocha 2006, 2013, 2017). Eduardo na Debora na-ekiri otu chọọchị ebe ndị mmadụ nwere ike ịzụrụ onwe ha eji eji ejiji, egwu egwu egwu, [Foto dị n'akụkụ aka nri] ma ghara ịrapara onwe ha na-agbanye aka na denomination ka ha wee nwee ike ịnabata ndị Brazil na-eto eto si n'akụkụ niile. Ha choro ka otu uka tinye uche na ndi otu Brazil ndi biara n'Australia, ebe ha biara n'ebighi ezi n'ulo ha.
Ka ọ dị ugbu a, nkezi afọ nke ọgbakọ dị iri abụọ na ise ruo iri atọ na ise, na enwere mmadụ iri itoolu na-arụsi ọrụ ike .Ma, ebe ọ bụ na ha bụ ụmụ akwụkwọ nọ n'Australia, enwere nnukwu mgbanwe na ọgbakọ, ọtụtụ ndị na-abata na ndị ọzọ na-alọghachi na ala nna. Ọtụtụ n'ime ha abụghị ndị okpukpe na Brazil ma chọọ ụka maka nkwado mmetụta uche, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ego, na ebe ọ ga-ezute ndị Brazil ndị ọzọ nọ n'ógbè ahụ.
Na 2016, onye otu onye Brazil ọzọ, Jonathan Bolkenhagen, ka a họpụtara ịbụ pastọ na CNA mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ Akwụkwọ nke Alphacrucis. N'otu afọ ahụ, Jonathan Bolkenhagen malitere ịbanye na Canberra iji gbaa alaka ọhụrụ nke chọọchị ahụ n'isi obodo. Alaka a na-ebute obodo Brazil, ma ọgbakọ dị obere ma jikọtara ezinụlọ ndị ghọọ ụmụ amaala Australia. E nwere ihe dị ka mmadụ iri atọ n'ime ọgbakọ dị na Canberra.
A pụrụ ịkọwa aha chọọchị na akụkụ abụọ: "Ọhụrụ Alliance" na-ezo aka ná njikọ ahụ Jizọs mere n'obe ya na Chineke. A choputara "obodo" n'ihi na nzuko ahu adighi-anọchite anya nzuko obula, obu ezie na ha na ndi ozo no na nzuko ndi Kraist nke Australia (Assembly nke Chineke bu Australia). Ndi choputara choro iziga ozi na ha nakweere ndi mmadu site na ndi otu okpukpe. Na nchikota, ha choro igosiputa mmekorita a na Chineke na ha choro ibu uzo ("obodo") nye ndi na-eso ya. Ụkpụrụ chọọchị ahụ bụ: "ụka dị mfe, nke nwere obi ụtọ ma na-agbanwe agbanwe."
CNA na - eji ụlọ ọrụ Ụlọ Nzukọ Ọgbakọ nke Petersham. Ọrụ dị n'ehihie Sọnde (dị ka ọ dị na Brazil), ya mere, ha anaghị arụ ọrụ n'asụsụ Bekee kwa ụtụtụ. CNA nwekwara ụlọ ọrụ n'azụ ụka ahụ, Pastọ Saar na chọọchị ya kwadoro ya.
Ka o sina dị, ndị guzobere agbabeghị na chọọchị pastọ Saar dịka ihe atụ maka CNA. Nyere na ha na-ewere onwe ha na ha abụghị ndị ụka, ha gara n’ihu na-achọ ụzọ ndị ga-aga nke ọma iji kwado onwe ha. Otu n'ime ụka ndị na-akpali ha bụ megachurch nke Australia Hillsong (Connell 2005; Goh 2007; Riches and Wagner 2017; Rocha 2017, 2013; Wagner 2013). Ha na-enwe mmasị na nka ọrụ Hillsong, ọganiihu ya, ezighi ezi ya, na agwa adịghị ya nkenke (gụnyere uwe, akparamaagwa na ọnọdụ ndụ) n'ebe ndị bịara ụka nọ. Hillsong na-arụ ọrụ dị ka ezigbo ihe nlereanya n'ihi na, dị ka Hillsong, CNA na-adabere na ndị ntorobịa. Ọrụ CNA yiri Hillsong albeit na obere obere: ha na-egosipụta otu egwu; enwere ọnọdụ na-adabaghị adaba (n'asụsụ Paspọ na ọgbakọ ọgbakọ yana ụdị ejiji); chọọchị bụ ọchịchịrị na ezigbo oge telecasts nke gbalaga na song lyrics na-beamed na na ákwà n'akụkụ ogbo. Onye ọ bụla nọ n’ọgbakọ na-agba egwú, na-agụkọkwa egwú ọnụ. Ha nwere ike ibuli aka ha, lekọta anya, ma ọ bụ ibikwasị aka ha n’obi.
CNA bụ ụka Pentikọstal nke jikọrọ Chọọchị Ndị Kraịst nke Australian (nke a maara dị ka mgbakọ dị iche iche nke Chineke n'Australia). Dika odi otua, o kwere na onyinye nke Mo Nso, dika dika glossolalia (na-ekwu okwu n'asụsụ dị iche iche), ịgwọ ọrịa Chineke, na ibu amụma. O nabatara Baibul dika okwu Chineke ma kwenye na ihe omumu ya nwere ike itinye aka na ndu ndi mmadu kwa ubochi.
Nyere na CNA bụ ụka nke ndị Brazil Brazil kwadoro ma na-enwe mmetụta nke Pentikọstal nke Australia na Mekschurch Hillsong, CNA aghọwo ngwakọ nke ihe ndị ọzọ Brazil Brazil Baptist na chọọchị dị egwu na-ewute Hillsong.
N'otu aka, dị ka Hillsong, CNA nwere ike ịre "New Paradigm" (Miller 1997) ma ọ bụ "Chọọchị enyi" (Sargeant 2000). Ụdị ụdị nke Iso Ụzọ Kraịst na-agbasa n'ụwa nile ebe ọ bụ na 1960s na ụka ndị dị otú ahụ "na-ahazi ihe omume na ọrụ ha iji dọta ndị na-anọghị na chọọchị" (Sargeant 2000: 2-3). Ha na-eme nke a site na ịmepụta ikuku nzuzo, iji asụsụ na nkà na ụzụ mee ihe, na ilekwasị anya na ahụmahụ okpukpe. Chọọ ụlọ ụka na-agbazinye ego n'ụdị azụmahịa na ntụrụndụ, jiri ahịa na ịkọ ụkpụrụ, na ụzọ ọhụrụ. Dị ka Miller na Yamamori (2007: 27) si kwuo, ha "nọ na njedebe nke ụka Pentikọstal: ha nabatara eziokwu nke Mmụọ Nsọ mana itinye okpukpe n'okporo ụzọ dị nro na-eme ka ndị na-eto eto na ndị na-eto eto mara omenala, nakwa dị ka ndị na-agagharị agagharị bụ ndị na-etobeghị na omenala Pentikọstal. "Dị ka usoro, ọrụ ha na-atọ ụtọ (nke na-egosi ndụ, ọkpọ ọrụ ọkụ na ụda, nnukwu ákwà), na ilekwasị anya bụ na ndụ mmadụ kwa ụbọchị (ya na ozi ndị dị n'elu nchebara echiche bara uru).
N'aka nke ọzọ, ọ bụ ezie na "ụka ọhụrụ" ma ọ bụ "ndị na-achọ ịchọta enyi" na-elekwasị anya na ozi ọma banyere ịhụnanya Chineke kama ime mmehie, hel ma ọ bụ ụkọ ọnụ, CNA na-ekwusakwa banyere isiokwu ndị ọzọ. CNA pastọ nwere ekele na ndị na-eto eto nwere ike ịhọrọ ozi ịhụnanya, ma ha chere na ha apụghị ilekwasị anya nanị n'ịhụnanya ma kwesị ikwusa ozi ọma n'ozuzu ya.
Ọ bụ kpọmkwem ngwakọ a nke na-adọta ụmụ akwụkwọ Brazil nye CNA, dịka ụka nwere ike ịrụ ọrụ dị ka mmiri dị n'etiti obodo Brazil na Australian na omenala okpukpe (Rocha 2013).
Dị ka ụlọ ụka ndị ọzọ na-asọ oyi, CNA na-enyere ndị na-akwaga n'usoro nke imeri agụụ, agụụ ụlọ na ihe ịma aka nke imeghari na mba ọhụrụ ahụ. [Foto dị n'aka nri] CNA na-enye ndị na-eto eto Brazil ohere maka iwulite obodo site na ọrụ, nzukọ kwa izu ijikọ otu, njem ịma ụlọikwuu, ebe a na-a barụ mmanya, nnọkọ oriri na ọ beachụ beachụ, nri obodo nke na-egosipụta nri ndị Brazil na ihe omume ntụrụndụ ndị ọzọ. Tupu na mgbe emume mgbede Sọnde gasịrị, ndị ọgbakọ na-anọkarị na ngalaba ụlọ ụka ogologo oge. Chọọchị na-enyekarị kọfị, ihe ọ softụ softụ dị nro na nri ka ndị ọgbakọ wee nwee ike izute ibe ha ma wusie mmetụta nke obodo / ezinụlọ. [Foto dị n'aka nri] Nke a bụ oge ndi ozuzu aturu ka ha na ndi otu ogbako kparita uka ma jua ha banyere izu gara aga ma chọputa ihe ha choro.
Otutu, ndi ozuzu aturu na enyere ndi otu aka aka ka ha dozie okwu banyere oge ha di obere, ebe ha no ndi ikwu ha anya dika umu akwukwo mba ofesi n’Australia, enweghi asusu bekee, ichota ulo na oru, ya na ije ije ala. CNA na enyere ha aka imeghari na ndu ohuru n’Australia site n’inye ha nkuzi na barista na nka nhicha, asusu bekee na CV n’edeputa umu akwukwo ndi Brazil n’etu klas, otutu n’ime ha enwetabeghi oru ha na ndu ha.
CNA nwere ọtụtụ ihe omume n'afọ. Dị ka ọmụmaatụ, ndị ụka Friday ọ bụla na-ezukọta na ndị nta ma ọ bụ "jikọọ" otu obodo. Ndị a dị iche iche na-arụ ọrụ dịka otu ìgwè na-akwado maka inye ndị òtù ezinụlọ siri ike-na-eche. N'ọmụmụ ihe ndị a, ndị otu na-eweta nri iji kesaa, na-akpakọrịta, ma na-amụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ ma na-ekpe ekpere ọnụ. Tụkwasị na nke a, na mmalite nke afọ congregants na-enweta ụdị ngwa ngwa nke iri abụọ na otu iji lekwasị anya n'àgwà ndị òtù na-ele Chineke na otú ha si arụ ọrụ dịka ụka. Kemgbe 2008, ha ahaziri njem anọ na-abọ n'ehihie. Na chọọchị a, ha nwere ọrụ abụọ n'ụbọchị, ọmụmụ Bible, baptizim mmiri, na ntụrụndụ dịka egwuregwu bọl. Malite na 2012, CNA agbagoro nzukọ ụbọchị atọ kwa ọnwa na-egosi na ndị pastọ si Brazil. Nyere na CNA bụ ụka maka obodo Brazil, ọ na-emekwa ihe omume Brazil dịka nke July Party (caipira festa) na mgbakwunye na ememe ndị Kraịst.
Ndị isi pastọ Eduardo Ramos na Debora Oliveira na-edu ụka, yana AssistantPastor Jonathan Bolkenhagen. A na-ekebanye CNA kwa ụbọchị na "ọrụ" nke ndị òtù ọgbakọ na-eduzi bụ ndị ndị pastọ na-edu. Ndị nlekọta ndị a bụ: ịnabata ndị ọhụrụ, ile ọbịa (na-ahazi nri maka ọrụ na ihe omume), ụlọ ụmụaka (otu n'ime afọ atọ), ụmụaka (anọ ruo afọ iri na asaa), ntorobịa (iri na asatọ ruo afọ iri atọ) , na-efe ofufe (ndị òtù na-arụ ọrụ n'oge ọrụ), mmepụta (vidiyo nke ọrụ na ihe omume, mgbasa ozi), na enyemaka mmadụ.
Ha nwekwara ndị isi isii nke jikọtara otu ìgwè ndị zụrụ azụ ma họpụta ha site n'aka ndị ndu chọọchị.
CNA na-enweta site na conundrum ndị ọzọ na-aga chọọchị. Ebe ọ bụ na ha bụ ebe obibi nke ndị Brazil, ha na-eji asụsụ Portuguese na ọrụ ha na ihe omume ndị ọzọ, ememe ememe Brazil, na ịlụ di na nwunye okpukpe Brazil na nke ụwa. Otú ọ dị, nke a na-egbochi mmegharị n'ime obodo. Ọzọkwa, site n'ịnọgide na-enwe omenala nnabata, asụsụ na mpi, ha nwere ike ịhapụ ndị na-akwaga mba ọzọ, ọgbọ nke abụọ Brazil, na ndị ahụ na-akwaga na-achọ "iwekọta" ngwa ngwa. N'otu oge ahụ, ọ bụrụ na ha anabata asụsụ omenala obodo na omenala ha, ha agaghị enwe ike inye nkwado zuru ezu maka ndị bịara ọhụrụ.
CNA Pastọ maara nke ọma nsogbu a ma hazie maka ọrụ iji sụgharịa ya n'asụsụ Bekee maka ndị Australia bụ ndị chọrọ isonyere ha. Ha maara nke ahụ, dịka ndị na-eto eto na-alụrụ di (ndị Brazil ndị ọzọ na ndị Australia) ma nwee ụmụ, CNA ga-enwe ihe omume na Bekee ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ijigide ọgbọ ọhụrụ a.
Ihe ịma aka ọzọ bụ oke ọnụ ọgụgụ dị elu n'ime ọgbakọ nyere ndị òtù ahụ bụ ụmụ akwụkwọ ụwa n'Australia. Ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị na-abịarute na mba ahụ na-ahapụkarị ala nna nna, ọ na-esiri ike iwulite ọgbakọ dị ike ma nọgide na-arụ ụka dị mma. Nke a pụtakwara na chọọchị na-enweta ego. Dị ka ụmụ akwụkwọ, ndị otu anaghị ejide ọrụ oge niile ma nwee nnukwu ego. Tụkwasị na nke ahụ, mgbe ụfọdụ ụka na-enyere ụmụ akwụkwọ aka, ego, nri ma ọ bụrụ na ha na-agba ọsọ na nsogbu ego. Ihe ọzọ na-eme ka ọgbakọ na ego ha dị ala bụ na ndị pastọ na-arụ ọrụ oge nile n'èzí chọọchị ma nwee obere oge ịrụ ọrụ maka ụka.
Foto #1: Foto nke Eduardo Ramos.
Foto #2: Foto nke otu nkwekọ ofufe.
Image #3: Foto nke Jonathan Bolkenhagen.
Foto #4: Foto nke nzukọ nzukọ.
Image #5: Foto nke ije nri mgbe ọrụ ofufe gasịrị.
Foto #6: Ntugharị nke logo CNA.
Connell, John. 2005. "Hillsong: A Mega-Church na Sydney Suburbs." Onye Australia na-ese okwu 36: 315-32.
Goh, Robbie. 2007. "Hillsong na 'Megachurch' Omume." Ihe Okpukpe 4: 284-305.
Miller, Donald na Tetsunao Yamamori. 2007. Nzukọ Pentikọstal nke ụwa: Ọhụụ Ọhụụ nke Nkwado Mmekọrịta Ndị Kraịst. Berkeley, CA: Mahadum California Press.
Ahịa, T. na T. Wagner, eds. 2017. Obodo nta dị na Hillsong Examined: Ị na-akpọ m na mmiri. New York: Palgrave Macmillan.
Rocha, Cristina. 2017. "Ihe Ọbịbịa Bịa na Brazil: Ndị Brazil Na-eto Eto 'Ọchịchị na Hillsong.' Obodo nta a na-enyocha na Hillsong: Ị na-akpọ m na mmiri, dezie T. Riches na T. Wagner. New York: Palgrave Macmillan.
Rocha, Cristina. 2013. "Njikọ Pentikọstal nke Transnational: onye Australia nke Megachurch na Chọọchị Brazil nke dị n'Australia." Pentikọst 12: 62-82.
Rocha, Cristina. 2006. "Ụdị Ụzọ abụọ nke Chineke: Okpukpe na Nlekọta Okpukpe na Brazil dị na Sydney." Pp. 147-60 na Okpukpo okpukpe di iche iche na ndi mmadu, nke P. Patrap Kumar dezie. Leiden: Ọhụụ.
Sargeant, Kimon. 2000. Chọọchị Chọọchị: Na-akwalite Okpukpe Omenala n'Ụzọ Na-adịghị Azụ. New Brunswick, NJ: Mahadum Rutgers.
Wagner, Thomas. 2013. Ịnụrụ ụda Hillsong: Music, Marketing, Ihe Nghọta Ime Mmụọ na nke Ekebere na Megachurch. Unpublished Ph.D. Nkọwapụta, Royal Holloway University of London.